Double Taxation Avoidance | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
January 20, 2007, 12:10 pm
နောက်တစ်ချက် – ဒါက အစိုးရကိုတိုက်ဖျက်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ခံစားခွင့်ကို တောင်းဆိုကြခြင်းပါ။ လင်းစိတ်ထဲမှာတော့ အခြေအနေကို ကြိုးလျှော့လေးနဲ့ သွားတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ မစုစုနွေးပြောခဲ့သလို ကိုယ်ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကို ထိုင်စောင့်နေလို့မရဘူး။ ရရင် ရသလောက် ကြိုးစားပြီး ဖြေးဖြေးချင်း တလှမ်းချင်းတက်သွားရမယ်ဆိုသလိုပေါ့။
Comment by Anonymous January 26, 2007 @ 11:41 am
Comment by aTxIvG4001 January 30, 2007 @ 2:14 pm
Dear Atxivg4001, you are paying so much tax. I think you should discuss with the burmese in japan. I will ask my seniors first & I’ll let you know.
Comment by LIN LET KYAL SIN February 2, 2007 @ 9:39 am